E14 X555-54 elu okpomọkụ Nguzogide oven Oriọna njide - China Haimen Xinrong Electric
E14 X555-54 elu okpomọkụ Nguzogide oven Oriọna njide
Haimen xinrong electric co., Ltd na-pụrụ iche na-amị iche iche iche iche nke oven oriọna njide, nke na-eji maka gas oven, electric oven, dị ọcha uzuoku oven, uzuoku oven na na. The foto na-egosi anyị ọhụrụ ngwaahịa a: ndị E14 oven oriọna njide ihe nke X555-54 usoro nke a na-ekewa atọ ụdị: X555-54H, X555-54V na X555-54X.They nwere àgwà nke elu okpomọkụ na-eguzogide. Anyị factory ya agafeela ISO: 9001: 2000 quality usoro asambodo, ngwaahịa nwere OA, RoHS na othe ...
Haimen xinrong electric co., Ltd na-pụrụ iche na-amị iche iche iche iche nke oven oriọna njide, nke na-eji maka gas oven, electric oven, dị ọcha uzuoku oven, uzuoku oven na na. The foto na-egosi anyị ọhụrụ ngwaahịa a: ndị E14 oven oriọna njide ihe nke X555-54 usoro nke a na-ekewa atọ ụdị: X555-54H, X555-54V na X555-54X.They nwere àgwà nke elu okpomọkụ na-eguzogide. Anyị factory ya agafeela ISO: 9001: 2000 quality usoro asambodo, ngwaahịa nwere OA, RoHS na ndị ọzọ na asambodo, anyị ji ezi obi na-atụ anya ka ụlọ na mba ọzọ na ndị ahịa na-ajụ ase, ibido OEM na ODM iwu. N'otu oge ahụ, anyị nwere afọ 20 nke oven ụlọ ọrụ ahụmahụ, nke mere na anyị nwere a miri emi nghọta nke ụlọ ọrụ na ngwaahịa, ngwaahịa mmepe arụmọrụ.
E14 220-240V 15 / 24W oven bọlbụ
Soda wayo Glass
250 nwoke Ọnụ 90 ℃
Efere Oriọna njide
N'ozuzu Akụkụ (㎜)
250 nwoke Ọnụ 180 ℃
250 nwoke Ọnụ 45 ℃
Previous: E14 X555-43 oven Oriọna Light Bulbs Sockets njide elu okpomọkụ steamer Microwave
Next: E14 X555-54G Now oven Oriọna njide oven Light Dabara Adaba
gburugburu Head E14 njide
gburugburu Head E14 njide N'ihi Sale
gburugburu oven Oriọna njide N'ihi Sale
Now oven Light njide
gburugburu oven Light njide N'ihi Sale
N'ogbe gburugburu oven Oriọna njide
E14 X555-80H Now oven Light njide T300 Halogen
G9 WGB-A akụkụ anọ oven Oriọna Light Bulbs T300 ...
E14 X555-58 steamer Light njide Ceramics Holde ...
E27 X666-80H oven Oriọna njide T300 E27 steamer ...
G9 WGB-A oven steamer Oriọna njide OA T300 High ...
G9 WGA-40 steamer oven Oriọna njide Cover Gbaara